Tanora · Janoary, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Janoary, 2016
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Janoary, 2016
Azia Afovoany sy Kaokazy29 Janoary 2016
Ankizy 17 Novoinoin'ny Manampahefana Nandritry Ny Hetsi-panoherana Ny Fakàna Tany
Etiopia26 Janoary 2016
Teo anelanelan'ny 12 sy 17 taona ny ankamaroan'ireo ankizy maty novonoina. Asehon'ireo tatitry ny olompirenena ihany koa fa marobe ireo ankizy mpianatra an-tsekoly no naratra nandritry ny hetsi-panoherana.
Sivy Taona Nanoherana Ny Famoretan'ny Polisy Ao Arzantina
Amerika Latina23 Janoary 2016
Nandritra ny sivy taona, Arzantinina an-jatony avy ao amin'ny faritany Cordoba no nanatevin-daharana ny "Diaben'ny Kasikety" -- hetsika fanao isan-taona hanoherana ny fihoaram-pefin'ny polisy izay mialokaloka amina lalàna mampiadi-hevitra.
Afrika Mainty21 Janoary 2016
Azia Atsinanana21 Janoary 2016
‘Manao Fotsy Hoditra Fotsiny Ianao Dia Mandresy’ Dokambarotra Voatsiny Ho Mpanavakava-bolonkoditra Tao Thailandy
Azia Atsinanana11 Janoary 2016
"Milaza ny dokambarotra Thailandey iray fa afaka ho mpandresy ianao raha fotsy hoditra. Ity no dokambarotra mpanavakava-bolonkoditra indrindra hitako hatramin'izany."
Somaliland11 Janoary 2016
Amerika Latina08 Janoary 2016
Filatroana Afghana Niteraka Adihevitra Mafana sy Fanantenana Ho An'ny Fiarahamonina Misokatra Kokoa
Azia Afovoany sy Kaokazy08 Janoary 2016
Ho an'ny sasany mahery fo izy ireo, ho an'ny hafa "mpivaro-tena" izay "nampihatra ny hevitra Tandrefana" izy ireo. Toeram-piadiana ara-politika ny filatroana ao Afghanistana,